IFTIINKACUSUB.COM: Qiso dhab ah:Masayrka raggu ilayn waa masiibo qarsoon !
Sheekadan halkan idiinka soo socota waa sheeko iyo qisso dhab ah oo ka dhacday wadan wadamada Yurub ka mid ah,taasi oo iila muuqatay in aan dadka usoo gudbiya in ay fiican tahay , madama aan u arkay in ay tahay sheeko waxbadan laga faa'idaysan karo .
Magaca sheekadu sida kor ku xusan waxa uu yahay "Masayrka raggu ilayn waa masiibo qarsoon" iyada oo sababta aan sheekadan ugu magac daray ay tahay kadib markii aan wax badan ka ogaaday in sheekadani ay raad wayn ku leedahay nin gabadh jeclaaday kadibna Masayr iyo hiinase ku dhacay awadii uu gabdhii uu jeclaa uu foolxumo kula dhaqaaqay.
Waxa aynu sheekadan ku mala-awaali doonaa ,magacyo aan isleeyahay waxa ay u qalmaan dadka ay sheekadini khusayso ,magaca ugu horeeyaa waa Kariima oo aynu ugu yeedhi doono gabadha sida wayn ay sheekadani u khusayso amma aktarada Magaca labaadna waa Muxsin oo ah ninka sida layaabka leh sheekadan ugu suntan iyo Magaca sadaxaad oo ah Daacad oo isaga laftiisu sheekadan kaalin laxaadleh kaga jira.
Gogol xaadh :-
Dunidan aynu ku nool nahay doodi kama taagna in ay Jaceyl ku uu yahay wax jira oo Ilahay csw Aadmigiisa ku abuuray ,qofkasta oo aad waydiiso waxa uu yahay jacaylku waxa uu ku sheegayaa in uu jacaylku jiro balse waxa laga yabaa in qofkastaba uu qaab gooniya u fasiro.
Qofka uu jacaylku hayaa waxa la mid yahay , qof saaran Doon Bilaa shiraaq ah oo badwaynta dhexdeeda ay mawjadaha baddu ay marba meel ku tuurayaan,cid uu miciin sadaana aanay u muuqan .
Isbarasho dhex martay laba qof ayaa kow u ah asaaska jacaylka ,kadibna waxaa bilaabanta xiiso iyo wada sheekaysi kaasoo looga sii gudbo kalgacal iyo is-raali galin aakhirkana u gudubta jacayl dhab oo ay laba qof isu qadaan amma mid ahaan uu kan kale uu qaado.
Inta badan sheekooyinka kusoo aroora jacaylku, xiisu badan ma yeeshaan hadii ay labada qof ee isjeceli ay yihiin kuwo isaga garabaa ,isku sina u wada arka jacaylka ay isu qabaan inta uu leeg yahay,balse waxa ay sheekadu xiiso iyo xamaasad gooniya leedahay dadkuna ay jecel yihiin ,marka labada qof mid ka midii uu si daran wax u jecel yahay ,kan kalana aanu ku raacsanayn.
Jaceylku waa dareen ,waa lahasho ,waa hibasho , qofka wax jecel waxa ku abuuran warwar iyo walaahaw, qofka jacaylku hayaa waa jooge maqan oo aan dhanaba jirin,ma seexdo oo hurdo way kala tagaan .
Jacaylku malaha dhakhtar loola tago iyo daawo laga liqo oo markaaba kaa bogsiisa balse waxaa dhakhtar iyo daawaba u ah qofka uu jacaylku hayo, in uu helo qofkuu jecaylaa ee qalbigiisu la jiray.
Sheekada madama ay dhinacyo badan oo dad ahi ay ku jiri karaan ,waxaa aniga sheekadan xogteeda oo buuxda i siiyay si aadana iiga codsaday in aan qoro ,mid ka mida darafyada ay sheekadani khusayso ,kaasi oo ahaa mid qisadan iyo sida ay u dhacdayba bilaw ilaa dhamaad la socday.
Kariima madama ay kusoo kacantay noloshaasi sida kooban aynu ugasoo waranay lana soo kulantay xiliyadii uu dalku aadka u dhibatada badnaa ,waxa aad dareemi kartaa qof gabadh ah walibana aan sida u da'waynayn sida uu duruufta noocaasi ah uga soo bixi karto.
Muxsin waa nin lagu tilmaami karo da'ahaan dhalinyarada cuslaatay ,waa nin asal ahaan aad is odhan karto waxa uu u dhashay qurux inkastoo duruufta badan ee yurub talaa ay qofka dhalin-gadiyayso ,waa nin dherer kiisu meel dhexaad tahay midab ahaana casaan u dhashay.
Muxsin waa nin la odhan karo aqoon tiisa waxbarasho way dhisan tahay ,waa nin wakhti aad u badan ku noolaa wadamada yurub, waa nin ku hadla luqada svenska iyo Ingilishta ,waa nin dabeecad ahaan marka uu ku rabo aanad ka xiiso goynayn.
Dhinaca Diinta Muxsin waa nin wadaad ah ,mararka qaarna Masjidka kaliya ee ku yaala magalada uu joogo isagaba Imaam , Mu'adain iyo sheekha khudbada jimcaha akhriyaba isagaa ah .
Muxsin soo dhawaynta uu gabadhaasi u sameeyay,waxa ay gaadhay heer ay Kariima ay ka dareento in uu ninkani yahay nin fiican oo aan la hilmaami karin dhinaca walaalnimada iyo wanaaga uu leeyahay , iyada oo dhankeeda markasta u haysay ixtiraamka uu ka mudan yahay .
Maadama wadamadan Yurub ay khasab tahay in qof kastaaba uu cuntadiisa karsado ,waxa khasab ay ku noqotay Kariima iyo Muxsin in ay hal dhari wax ku wada karsadaan , lacagtana midkastaba uu qaybtiisa bixiyo ,iyada oo ay labadooduba ay shaqeeyaan, hadana waxaa inta badan cunta samayn jirtay Kariima madama wali uu iska sii jiro dhaqankeenii ahaa in dumarku wax inoo kariyan raguna uu meelahaas is amiiriyo.
Waxyabaha faniga ah ee markasta Muxsin iyo Kariima ka dhex dhici jiray waxaa ka mid ahaa ,in Kariima madamaa uu Muxsin yahay nin aad uga wayn dhinaca da'da ,in ay ku karaamayn jirtay markay u yeedhayso erayga "adeeeeeeer" balse Muxsin eraygaasi adeer ma uusan jeclaan jirin ,waxaanu u arki jiray in uu yahay mid ay ku fogaynayso gayaan nimadiisa dhinaca guurka !!
Kariima lafteedu caqligeeda ayay qabtaaye waxa ay eraygii "Adeeeeeeer" ku badashay madama uu muxsin dhibsaday kelmadda Walaalo ,inkastoo uu Muxsin uu kelmaadaasi walaal uu aad ugu riyaaqi jiray, hadana waxa uu kasii jeclaan lahaa in ay markasta oo ay u yeedhayso ay ku tidhaahdo inaabti Muxsinow "abeensadii farta loo taagay fanaxay u boodaa" .
Muxsin madama ay in muddo ah ay wada daganayeen isaga iyo Kariima ,waxa uu oogaaday in ay gabadhani tahay tii Somalidu ku maahmaahday in la guursado "Boqol kala-bax"waxa uu go'aan saday goor ay noqotaba in uu gabadhan gacanta ku dhigo ,Muxsin war kuma seegana in gabadhani ay wakhtigan xaadirka ah ay madax banaan tahay ,warkaasi oo uu helay intii aanay gobolka iman.
Ilayn noloshu guul ma leh.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Muxsin waxa uu u yeedhay Kariima ,waxaanu si aan gabasho lahayn ugu soo bandhigay jacaylka dhabta ah ee uu u qabo ,waxa uu u sheegay in uu go'aan saday dhankiisa in uu guursado.
Ma'ilaawin maalmahan , Mahadhada jacayl'kee
Ma'imiray anoo moog ; waa layla magee.
Kariima markii uu codsigaasu usoo gudbiyay Muxsin ,waxa ay jawaabtii ku noqotay Laf-dhuun-gashay ,waxa ay odhan kari wayday maya ,waxa kaloo ay odhan kari wayday haa arintuna waxa ay ku noqotay af-kala qaad .
Muxsin wakhti yar ka hor waxa uu dadka qaar gaadhsiiyay in isaga iyo Kariima aanay jirin wax guurkooda ka qabyo ahi, xataa haday tahay isla jaan gooynta qadarka uu meherku noqonaayo ,habeenka arooska iyo waxkale kuma garatide in xaflada aroosta cida imanaysa ma hebelbaa mise heblaayo farta la isugu fiiqay go'aan cadna lagu kala tagay.
Waxa ay si kal iyo laab ah Muxsin ugu sheegtay kuna celcelisay in if iyo akhiraba ay u hayso abaal aan la koobi karayn,balse wax ay sidii Dayax shan iyo tobnaad ugu cadaysay in ay xaq u leedahay in waxkasta oo mustaqbalkeeda tabanaya in aan ka fiirsato, waxa ay in badan ku celcelisay in aanu isku qaldin abaalkii fiicnaa ee uu u galay iyo go'aanka mustaqbalka noloshayda .
Daacad runtii waxaa la odhan karaa waa nin dhalinyaro ah akhyaarna ah ,waa nin da'diisa ka wayn ,waa nin wadamadan yurub dhowr sano joogay , Daacad waa nin af-gaaban dantiisana ka adag ,dhinac kale marka laga eegana waa nin Waalid adeeca .
Madama ay Hotelkii sadax qof oo Somali ah ay ku degan yihiin , waxa ay noqdeen sadax qof ee ceeshow milixa ,Muxsina waxa si gaar ah u noqday madama uu yahay ninka ugu wayn dhinaca da'da mid talada looga danbeeyo,inkastoo ay digo hoos ka nool tahay arintii u dhaxaysay Muxsin iyo Kariima.
Muxsin arintisii waxa ay noqotay "kadaroo dibi dhal" isaga oo aan waxba hubsan ayaa uu gabadhii marlabad hadana ceeb iyo af-lagadooyin aanay marnaba lahayn dusha ka huwiyay , waxa uu ku tilmaamay qadaf iyo foolxumo ay bari ka tahay.
Guntii iyo gaba gabadii :-
In badan ayaynu akhriste soo aragnay nin gabadh jecel oo hadii ay diido amaan mooyane aan waligee ceeb u quudhin , waxa laga hayaa rag badan oo Somali ah qaarkood markii gabadhii ay jeclayeen nin kale ka guursaday in amaan mooyaane aanay waligood aflagaado u gaysan.
Bal akhri heestan uu tiriyay abwaankan Somaliyeed:-
dusha nabar ha taabsin
hadal doqon ma garata
ha ku dayin ma yeshe
waxa dihatay hoyadii
dadnimada ku beerto
aabaheedna waa diric
ragna doorki weyee
waa Duriyad xalaale
Waxaa jira nin dooro
Dantu ceeb u yeeshee
Waxaa aamina u daraan
Hadii waayo diidaan,,
Soodoono waa gare waa gare
Aana kuu diyaaro
Daryeelkeedu dheer yahay
Xilaa duudka saaree
Hadii taa aad,diido
Dowlka nolosha aamina
Dayac noqotoo waa qaan
Waana kula dacwinayaa………
Balse hada waxkastaba waa ay isbadaleen waxa aad arkaysaa sida hadaba sheekada inooga muuqatay Nin gabadhii uu jeclaa markii ay muradkiisi Guurka u oofin wayday balan ku qaaday in uu fadeexad iyo warxumo ka fidin doono,ciibtaasi oo aan marnaba qabanayn . Ilahay ha laga cabsado dumarkana yaan la ceebayn aakhirana ha la xasuusnaado.